Ungayikhetha Kanjani Ikhamera ye-IP
Ngiyazi ukuthi ungafunda izindatshana eziningi kangaka mayelana nalesi sihloko, kodwa ngithanda ukuhlanganyela imicabango yami ethile ngalesi sihloko. Kimina, uma ngithenga ikhamera ye-IP ...
Ngiyazi ukuthi ungafunda izindatshana eziningi kangaka mayelana nalesi sihloko, kepha mina'D uthanda ukwaba imicabango yami ethile ngalesi sihloko. Kimina, uma ngizothenga ikhamera ye-IP, ngingacabanga kakhulu. Isibonelo, yini engiyisebenzisela yona? Ngibeka kuphi ikhamera ye-IP? Ingabe ihambisana nesimo sami se-deco? Ayikho impendulo ephelele, umkhiqizo omuhle kuphela wokuhlangabezana nezidingo zakho. Kunezinhlobo eziningi zamakhamera we-IP,Ikhamera ye-Dome IP,Ikhamera yebhokisi IP,Ikhamera ye-IP yezinhlamvu. Mhlawumbe awazi ukuthi umehluko phakathi kwazo zonke lezi zinhlobo. Kodwa-ke, akufanele kube ukucatshangelwa kokuqala kwethu.
Okokuqala, kufanele sicabangele ukuthi ikhamera izofakwa kuphi, ngaphandle noma ngaphakathi? Kwangaphandle, siphakamisa ukuthi sikhetheIkhamera ye-IP engangeni manzi, noma ubufakazi besimo sezulu, noma ubufakazi be-vandal, bavame ukwenziwa ngensimbi noma nge-alloy. Kepha ngaphakathi kwangaphakathi, amanzi angangeni manzi akuyona into ebaluleke kakhulu.
Okwesibili, bheka ukuthi sidinga yini ikhamera ye-IP nomsebenzi we-PTZ osisiza ukuba sigweme izindawo ezifile. I-PTZ isho pan / TLT / ZOOM, ikhamera enjalo ivame ukumboza kuze kube ngama-350 degrees epanini naku-90 degrees at. Kodwa-ke, uma ubheka nje indawo ekhethekile, njengamakamelo wezingane,Ikhamera ye-IP ye-IP elungisiwe kufanelekile.
Okwesithathu, kufanele sicabangele ikhwalithi yesithombe (isinqumo). Ngakho-ke, kubaluleke kangakanani isithombe kuwe? Ikhamera ye-Megapixel IP (H.264 Image Compression) inikeza ukulungiswa okuphezulu kakhulu kunekhamera ye-VGA (JPEG Image Compression). Uma udinga izithombe ezinemininingwane ethe xaxa, ikhamera ye-IP ye-Megapixel I-Into yakho oyikhethayo.
Ngemuva kwalokho, amakhamera anentambo noma amakhamera we-wifi? Uma ikhamera ye-IP ikude kakhulu ne-router / hubs noma lapho isinali alunamandla ngokwanele, kusobala ukuthi awudingi amakhamera we-wifi. Kepha kufanele uqaphele ukuthi, uma ikhamera ye-IP ye-IP ifakwa lapho okuphuma khona kwamandla kungatholakali, ungacabanga nge-POE IP Camera, noma ikhebula le-poe splitter, noma i-DC Power Pigtail.
Ekugcineni, ukugwema ukusetha kwenethiwekhi ye-DDNS, umsebenzi we-P2P kufanele ubheke. Isethaphu elula futhi esheshayo eyodwa ye-WiFi ye-WiFi, Alukho ulwazi lobuchwepheshe oludingekayo.
Singase futhi sicabangele eminye imisebenzi eyengeziwe, njengokuxhumana kwe-alamu, i-Micro SD / TF Slot, eyakhelwe ngaphakathi mic / isipika njll, konke lokhu kuya ngesidingo sakho. Lapho sibuza abanikazi bamakhaya ukuthi basebenzisa amakhamera ethu ngakho-ke siyabonaUkuqapha Kwasekhaya (noma ukuphepha, noma ukubhekwa) phezulu kohlu, okunye ukusetshenziswa njengokugcina iso ezinganeni nasezilwaneni ezifuywayo zilandela kancane ngemuva kokuthula kwengqondo ukwazi ikhaya lakho kuphephile. Emindenini efuna ukufaka ukuvikelwa kubahlaseli, amakhamera we-IP asebenza njengokuvimbela okukhulu kepha okubaluleke kakhulu ukunika amalungu omndeni ngendlela yokuthi ahlale wazi (futhi abone futhi ezwe) ukuthi kwenzekani noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya lawo noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya labo noma azungeze ikhaya labo noma bezungeza ikhaya labo.
Ngiyethemba ukuthi lo mhlahlandlela ulusizo kuwe Guys. Futhi, wamukelekile ukubuza noma yimiphi imibuzo ofuna ukuyazi.
PHAMBI Izinto esingase sicabange ngendawo yokugcina yasekhaya noma yamafu yekhamera ye-IP
Izinto okufanele uzibheke uma uthenga amakhamera we-IP OLANDELAYO